Beeralayda Gobolka Gedo oo ka cabanaya ayyax xaalufiyay - Tilmaan Media
Beeralayda gobolka Gedo ayaa kacabanaya ayyax xaalufiyay beerihii dadka gobolkaas ay ka shaqaysanayeen. Ayyaxaan ayaa lasheegay in uu ku dagay dhul beereed ballaaran oo ku yaalla degmooyinka Baardheere iyo Doolow.
Beeralayda ayaa waxay kasoo kabanayeen fattahaadii roobabka ee sanadkii hore laakiin waxaa muuqata in ayyaxu uusan fursad u siin in beeralaydaas noloshoodu caadi kusoo noqoto.
“Ayyaxa inta u dhaxaysa magaalooyinka Doolow, illaa Luuq, iyo Baardheere ayuu wuxuu uga socdaa si laxaadle, si raxan raxan oo aad u xoog badan buu wada socdaa” ayuu yiri Cabdullaahi Diiriye Faarax oo katirsan iskaashatada beeralayda gobolka Gedo.
” Ayyaxa wuxuu naga soo galayaa dhinaca gobolada Baay iyo Bakool, si lixaad badan buu u soconayaa” ayuu ku daray Cabdullaahi Diiriye Faarax.
Sidoo kale Ismaaciil Maxamed Xidig gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya ayaa sheegay in Ayyaxu baabi,iyay beerihii ku yaallay in ka badan 50 kiilo mitir, sidoo kalana uu dhibaato xoogan u gaystay deegaanka.
Dhibaatada Ayyaxa ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay khattar ku haysay nolosha beeralayda Soomaalida. Waxaana muuqata in loo baahan yahay dadaal xoog badan oo wax looga qabanayo.